» रक्सौलको रेल कुर्दै काठमाडौँ, कहाँ अड्कियो काम ?
रक्सौलको रेल कुर्दै काठमाडौँ, कहाँ अड्कियो काम ?
२०७८ भाद्र २८, सोमबार १८:४७
काठमाडौँ । काठमाडौँ रक्सौल रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन भएको तीन वर्ष बिते पनि निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । सङ्घीय राजधानीलाई भारतको विहार राज्यको रक्सौलसँग जोड्ने गरी रेलमार्ग निर्माण गर्ने योजना बनाएर अध्ययन भए पनि दुई देशबीचमा सम्झौता हुन बाँकी हुँदा थप अध्ययन भएर निर्माणमा जान नसकेको हो ।